कुमारी बैंक: कम्पनी विश्लेषण ( आइतवार, बैशाख २२, २०७६)
बैंकले शेयरधनीलाई २१ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले प्रस्ताव पारित गर्न वैशाख २६ गते साधारणसभाको आयोजना गर्ने भएको छ । वैशाख ५ गतेसम्म शेयर किन्ने शेयरधनीले उक्त लाभांश पाउनेछन् । चालू आवको ९ महीनामा बैंकले रू. १ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३६ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा बैंकले रू. ७३ करोड ६३ लाख नाफा कमाएको थियो ।
हाल बैंकको चुक्तापूँजी रू. ७ अर्ब १६ करोड छ । २१ दशमलव २५ बोनस शेयर वितरण गरेपछि पूँजी रू. ८ अर्बभन्दा बढी पुग्नेछ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ६१ करोड ६० लाख छ । बिहीवारको कारोबार अवधिमा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिमा ४७ हजार ९६ कित्ता शेयर खरीद र ८ हजार ८ सय ८८ कित्ता विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-05-05 - 88 view(s) - abhiyan